Toriteny alahady 19 may 2013, Pentekoty | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 19 may 2013, Pentekoty
« Mampanantena hery ho antsika ny Tompo »
Ny Pentekoty dia efa nisy hatramin’ny andron’ny Testamenta Taloha , ary ny hevi-dalina fonosin’izany fety Masina izany dia ny 50 andro aorian’ny fotoam-panafahana ny Zanak’Israely , marihina amin’ny fanaterana ny voaloham-bokatra , izany hoe izay tsara indrindra sy sarobidy hatolotra ho an’Andriamanitra .
Amin’izao vanin’andro iainantsika izao kosa , 2013 mankalaza ny Pentekosta ny Kristiana . Inona no hevi-dalina fonosina sy ampitain’izany fetin’ny Pentekoty izany .
Raha mankalaza izao fety Kristiana izao ianao , fantatrao ve ny anton’ny hankalazano izany ary midika inona aminao ?
Hafatra 3 no ampitain’Andriamanitra ho antsika amin’ity andro Pentekoty ity
1° Pentekoty : Fanateram-bokatra , fanomezana ny tsara indrindra
Andriamanitra mihitsy no nanao dingana voalohany nanolotra ho antsika olombelona ny fanomezana tsara indrindra dia ny Fanahy Masina . Ny Fanahy Masina izay nomeny maimaimpoana mba hitondra fifaliana anaty sy fiadananam-po ary fitsaharana ho an’ny olona izay mety mandray izany
Raha izany no fanomezana sarobidy natolotr’Andriamanitra ho antsika amin’izao Pentekoty , inona no mba entintsika mankasitraka an’Andriamanitra ? Inona no entiko manatona an’Andriamanitra noho ny soa rehetra nataony tamiko? Ny fanoloran-tenantsika no ilainy , io no marika handrefesana ny fitiavantsika an’Andriamanitra.
2° Pentekoty : Fotoana fandinihan-tena
Na dia eo aza ny fahotana , efitra nampisaraka antsika tamin’Andriamanitra , raha mbola nomena antsika maimaimpoana izao tombon’andro izao sady nanoloran’Andriamanitra ho antsika ny Fanahy Masina dia misy dikany lehibe eo amin’Andriamanitra izany . Miandry ahy sy ianao ny Tompo mba hiverina Aminy . Pentekoty , fotoana fandinihin-tena handraisana fanapahan-kevitra hiverina tanteraka amin’Andriamanitra, izay ilay fanoloran-tena mba hananana ny fiainana vaovao ao amin’I Kristy .
3° Pentekoty : Fanomezana mampibanjina antsika ny andro farany
Ny asan’ny Fanahy Masina ao anaty no mampita sy mampibanjina antsika ny amin’ny andro farany. Io Fanahy Masina io koa no mampanaiky ny fontsika handray an’I Jeso ho ivon’ny fiainana ka handavantsika ny ota sy ny fahazaran-dratsy rehetra mamatotra mba hananana safidy handova ny fianana mandrakizay . Ny olona tsy ankanavaka haminany , handinika izay lazain’Andriamanitra sy ny amin’ny fiafaran’izao tontolo izao(Mat24) . Ka hahay hanararaotra ny tombon’andro ahavelomany hibanjinany ny any ankoatr’izao fiainana izao . Sarobidy loatra ny Fanahy Masina ary ampy mahasahan ny fiainan’ny mino rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra .
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 25 mai 2013